Tallaabada Kenya ma tahay mid Soomaaliya lagu cadaadinayo in wada xaajood lagu xalliyo muranka badda? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, The Star Kenya
Xiisadda diblomaasiyadeed ee labada waddan ayaa hadda u muuqata mid meeshii ugu sarreysay gaadhay
Kiiska muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa hadda horyaalla maxkamadda ICJ
"Dad badan oo Soomaali ah waxay tuhunsan yihiin in xiisadda Diplomaasiyadeed ee Kenya ay soo cusbooneysiisay ay tahay istiraatiijiyad looga gol leeyahay in Soomaaliya lagu cadaadiyo sidii muranka badda ee labada dal u dhaxeeya loogu xallin lahaa si hoose oo ka baxsan maxkamadda ICJ", ayuu yiri.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: "Dadka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in Kenya ay ka faa'iideysatay tabaryarida dowladdooda, taasina ay u sahashay iney biyahooda sheegato, maadaama lahaanshaha biyahaas uusan muran ka taagneyn markii ay Soomaaliya ka jirtay dowlad awood badan".
Go'aankii ay garsooreyaasha maxkamadda ICJ ku aqbaleen dacwadda Soomaaliya
Balse Soomaaliya oo arrintaas ka biya diidday ayaa go'aansatay in ay xaajada hor geyso maxkamadda ICJ ee Qaramada Midoobay.
Hase yeeshee, bishii Febraayo ee sannadkii 2017-kii ayey Maxkamadda Cadaaladda ee Qaramada Midoobay go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Maxaa sababay carada Kenya?
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa BBC-da u sheegay in go'aankan kahor, Kenya ay dowladda Soomaaliya u dirtay warqad ay uga dalbanaeyso in raaligelin ay ka bixiso arrinkaasi beecinta shidaalka ah, dibna ug laabato.